Ianao aloha! - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Voalohany ianao!
Tianao ny mandà tena? Mahatsiaro mahazo aina ve ianao rehefa tsy maintsy miaina amin'ny andraikiny? Tsara kokoa ny fiainana raha tena tianao. Matetika aho no mijery tantara mahaliana amin'ny fahitalavitra momba ny olona manao sorona ny tenany na mamela ny tenany ho an'ny hafa. Mora hita maso izany ary azo tsapain-tanana amin'ny fiarovana sy ny fampiononana amin'ny efitrano fandraisam-bahiko.
Inona no tokony holazain'i Jesosy momba izany?
Niantso ny vahoaka rehetra sy ny mpianany i Jesosy hoe: "Raha misy te-ho mpianatro dia tsy maintsy mandà ny tenany izy, ka hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy" (Marka 8,34 fandikana New Geneva).
Nanomboka nanazava tamin'ny mpianany i Jesosy fa hijaly be izy, nolavina ary hovonoina. Sosotra noho ny tenin'i Jesosy i Petera ary nanaraby azy i Jesosy noho izany ary nilaza fa tsy miraharaha izay zavatra avy amin'Andriamanitra i Piera, fa ny zavatra an'ny olona. Amin'izany toe-javatra izany, i Kristy dia nanambara fa ny fandàvana ny tenany dia "fananan'Andriamanitra" ary ny hatsaran'ny Kristiana (Marka 8,31-33).
Inona hoy i jesosy Tsy tokony hahafinaritra ve ny kristiana? Tsia, tsy izany no fisainana. Inona no dikan'ny hoe mandà ny tenanao? Tsy ny aminao sy ny tianao ihany ny fiainana fa ny fametrahana ny tombontsoan'ny olona alohan'ny fiainany ihany. Ny zanakao voalohany, ny vadinao aloha, ny vadinao aloha, ny ray aman-dreninao aloha, ny mpifanila trano aminao voalohany, ny fahavalonao aloha sns.
Ny mitondra ny hazo fijaliana sy ny mandà ny tenanao dia hita taratra ao amin'ny didy fitiavana lehibe indrindra ao amin'ny 1 Korintiana 13. Inona izany? Ny olona mandà ny tenany dia manam-paharetana sy tsara fanahy; tsy mialona azy na mieboebo, tsy mirehareha. Io olona io dia tsy masiaka ary tsy manizingizina ny zony na ny fanaony, satria tsy tia tena ny mpanara-dia an'i Kristy. Tsy sosotra izy ary tsy miraharaha ny tsy rariny nitranga. Rehefa mandà ny tenanao ianao dia tsy faly amin'ny tsy fahamarinana, fa kosa rehefa misy lalàna sy fahamarinana. Na izy, izay ny tantaram-piainany dia ahitana ny fandàvana ny tenany, dia vonona ny handia na inona na inona, tonga na inona na inona, vonona ny hino ny tsara indrindra amin'ny rehetra, manantena ny toe-javatra rehetra, ary miaritra ny zava-drehetra. Ny fitiavan'i Jesosy ny olona toy izany dia tsy ho levona velively.
nataon'i James Henderson